milina fanamafisam-peo matetika-mpanamboatra milina RF
Mpanamboatra milina fanamafisam-peo matetika / milina fantsom-pifandraisana RF PVC amin'ny plastika welding sns.
Fanamafisana matetika, fantatra amin'ny alàlan'ny Radio Frequency (RF) na welding diélectric, dia ny fizotry ny fampifangaroana ireo fitaovana amin'ny alàlan'ny fampiharana ny angovo matetika amin'ny radio amin'ilay faritra hanatevin-daharana. Ny valiny dia azo atao matanjaka toy ny akora tany am-boalohany. Ny HF Welding dia miankina amin'ny fananana sasany amin'ny fitaovana atsofoka mba hiteraka ny hafanana amin'ny sehatry ny herinaratra mifandimby. Midika izany fa ny fitaovana sasany ihany no azo amboarina amin'ny fampiasana an'io teknika io. Ny fizotrany dia mitaky fametrahana ireo ampahany hampiana amin'ny haavo elektromagnetika matetika (matetika 27.12MHz), izay ampiharina eo anelanelan'ny bara vy roa. Ireto bara ireto dia miasa ho mpamaky tsindry mandritra ny fanafanana sy ny fampangatsiahana. Ny sehatry ny herinaratra mavitrika dia mahatonga ny molekiola ao amin'ny thermoplastics polar hihodina. Miankina amin'ny jeometriôma sy ny fotoam-dipoleany, ireto molekiola ireto dia mety handika ny sasany amin'ireo hetsika oscillatory ho lasa angovo hafanana ary hiteraka hafanan'ny fitaovana. Ny refin'io fifampiraharahana io dia ny fatiantoka very, izay miankina amin'ny mari-pana sy ny hafanana.
Polyvinylchloride (PVC) sy polyurethanes no thermoplastika mahazatra indrindra ampifangaroin'ny fizotry ny RF. Azo atao ny manamboatra polymère hafa amin'ny RF, ao anatin'izany ny nylon, PET, PET-G, A-PET, EVA ary ny resina ABS sasany, saingy misy fepetra manokana takiana, ohatra ny nylon sy ny PET dia azo amboarina raha ampiasaina ny bara fantsona preheated raha ampiana ny Hery RF.
HF welding matetika tsy mety amin'ny PTFE, polycarbonate, polystyrene, polyethylene na polypropylene. Na izany aza, noho ny famerana efa ho avy eo amin'ny fampiasana ny PVC, dia novolavolaina ny mari-pahaizana polyolefin manokana izay manana ny fahaizana azo averina HF.
Ny lahasa voalohany amin'ny fantsom-panafody HF dia ny famolavolana atiny roa na mihoatra ny hatevin'ny lamba. Misy fiasa maromaro tsy voatery atao. Ny fitaovana fantsom-bozaka dia azo sokirina na asiana profiled mba hanome endrika endrika haingo ny faritra miharo iray manontolo na afaka mampiditra teknika fanaovana embossing hametrahana litera, logo na vokarin'ny haingon-trano amin'ireo entana vita amin'ny vy. Amin'ny alàlan'ny fampidirana ny sisin'ny fanapahana mifanila amin'ny velaran-tariby dia afaka mandroso sy manapaka fitaovana iray ny fizotrany. Ny sisin'ny fanapahana dia mametaka ny plastika mafana mba hamelana ny fihoaram-pefy tafatsoaka, noho izany ity fomba ity dia antsoina matetika hoe fantsom-pirinty.
Ny welder plastika mahazatra dia misy mpamokatra hafanana avo lenta (izay mamorona ny onjam-peo matetika), presse pneumatika, elektroda mamindra ny onjam-peo matetika amin'ny fitaovana izay ampidinina ary fantsom-bozaka izay mitazona ny fitaovana. Ny masinina dia mety manana baoritra mifototra izay matetika apetraka ao ambadiky ny electrode, izay mitarika ny fiverenana miverina amin'ny masinina (pointe grounding). Misy karazana lasera plastika isan-karazany, ny milina fanitso, masinina fonosana ary milina mandeha ho azy no fahita indrindra.
Amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny famolavolana ny masinina, ny tanjaky ny saha dia azo ovaina amin'ny fitaovana ampidirina. Rehefa mihodina, ny masinina dia voahodidin'ny sehatry ny onjam-peo izay, raha matanjaka loatra, dia mety hanafana ny vatana somary. Io no mila arovana ny mpandraharaha. Ny tanjaky ny sahan'ny radio matetika dia miankina amin'ny karazana masinina ampiasaina ihany koa. Amin'ny ankapobeny, ny masinina misy elektroda misokatra misokatra (tsy misy fiarovana) dia manana saha matanjaka kokoa noho ny masinina misy herinaratra mihidy.
Rehefa mamaritra ny elanelan'ny electromagnetic matetika radio dia matetika voatonona ny fahita eny an-tsaha. Ny refesina avela ho an'ny lasera plastika dia 13.56, 27.12, na 40.68 megahertz (MHz). Ny refin-indostrialy malaza indrindra amin'ny fantsona HF dia 27.12MHz.
Ny sahan'ny radio matetika avy amina lasera plastika dia miparitaka manodidina ny masinina, saingy matetika indrindra eo anilan'ny masinina ihany izy io no matanjaka tokoa ny sahan'asa ka mila fitandremana. Mihena be ny tanjaky ny saha raha lavitra ny loharano. Ny tanjaky ny saha dia omena amin'ny fandrefesana roa samy hafa: ny tanjaky ny herinaratra dia refesina amin'ny volts isaky ny metatra (V / m), ary ny tanjaky ny sahan'andriamby dia refesina amperes isaky ny metatra (A / m). Ireo roa ireo dia tsy maintsy refesina mba hahalalanao ny tanjaky ny sahan'ny radio matetika. Ny riaka mandalo ao aminao raha mikasika ny fitaovana ianao (contact current) ary ny riaka izay mamakivaky ny vatana rehefa mihombo (tsy maintsy ampidirina) dia tsy maintsy refesina ihany koa.
Tombony azo amin'ny teknolojia fanamafisana matetika
Ny famehezana HF dia miseho avy any ivelany mankany ivelany amin'ny alàlan'ny fampiasana ilay fitaovana ho loharano mafana. Ny hafanana dia mifantoka amin'ny lasibatry ny las ka ny fitaovana manodidina dia tsy mila hafanana be vao tonga amin'ny maripana kendrena amin'ny mpiray.
miaraka HF fanafanana tsy misy raha tsy rehefa velombelona ny saha. Raha vantany vao mandeha ny motera dia maty ny hafanana. Io dia ahafahana mifehy bebe kokoa amin'ny habetsaky ny angovo izay hitan'ny fitaovana mandritra ny tsingerina iray manontolo. Ho fanampin'izay, ny hafanana vokarin'ny HF dia tsy mamirapiratra amin'ny maty toy ny amin'ny maty mafana. Izany dia manakana ny fahamendrehan'ny hafanana ny fitaovana manimba ny las.
Ny fitaovana HF matetika dia mihazakazaka "mangatsiaka". Midika izany fa rehefa vonoina ny HF dia mijanona tsy hafanana intsony ilay fitaovana fa mijanona eo ambany fanerena. Amin'ity lamaody ity dia azo atao ny manafana avy hatrany, manamboatra ary mampangatsiatsiaka ny fitaovana ao anaty famoretana. Ny fifehezana bebe kokoa ny Weld dia miteraka fifehezana bebe kokoa amin'ny fitrandrahana vokatr'izany, ka mampitombo ny tanjaka weld.
Ny "Weld RF" dia "madio" satria ny hany fitaovana ilaina hamokarana las HF dia ilay fitaovana ihany. Tsy misy adhesives na by-vokatra tafiditra ao amin'ny HF
Sokajy Technologies Tags haavo, fanamafisam-peo matevina matetika, welder matetika, serivisy avo lenta, Fanamafisana matetika matetika, raki-peo mahazatra, RF, RF welding, Masinina mihodina RF, Plastika welding RF Post Fikarohana